Luis Suarez Oo Guul Soo Laabasho Leh Ku Hogaamiyay Barcelona %
Luis Suarez Oo Guul Soo Laabasho Leh Ku Hogaamiyay Barcelona
Barcelona ayaa gaartay guushii ugu horeysay ee Champions League ka dib markii ay 2-1 ugu badisay kooxda Inter Milan oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, iyadoo Luis Suarez uu dhaliyay labada gool ee ay Barcelona ku badisay.
Lionel Messi ayaa lagu soo bilaabay shaxda Barcelona ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac uu ku maqnaa kulamadii ugu danbeeyay.
Daqiiqadii 3aad ayuu goolka ka dhaliay weeraryahanka : Martines ayaa kubad fiican loo dhigay isagoo kubada ka xoogsaday Lenglet ka hor inta uusan ku dhameystirin cagta bidix isagoo dabamariyay gooljaue Marc ter Stegen.
Inter Milan ayaa wacdarro dhigtay iyagoo abuuray fursad ka badan intii ay abuurtay kooxda Barcelona qeybtii hore, waxa ay xitaa soo taabteen shabaqa mar labaad iyadoo goolka loo diiday inuu offside ahaa.
Kadib Qeytii labaad markii dib la isaga soo laabta Daqiiqadii 58aad: Barcelona ayaa goolka barbaraha heshay ka dib karoos uu soo dhigay Arturo Vidal iyadoo Luis Suarez uu kubad fiican dabmariyay goolhaye Samir Handanovic taasoo ciyaarta ka dhigtay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 84aad: Barcelona ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta markii Messi uu kubad ku garaacay Asamoah isagoo u dhigay Suarez kaasoo si fiican u koontaroolay islamarkaana shabaqa ku hubsaday, waa goolkii labaad ee uu dhaliyo xiddiga reer Urugua.
Barcelona ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Inter Milan iyadoo Blaugrana ay guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka Champions League ay gaartay.